iOS 11.1 beta 1 နှင့် iOS 11.0.1 အကြားမြန်ဆန်စွာစမ်းသပ်မှု အိုင်ဖုန်းသတင်း
iOS 11.1 beta 1 နှင့် iOS 11.0.1 အကြားမြန်ဆန်စွာစစ်ဆေးမှု
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်က Cupertino မှယောက်ျားများသည် iOS 11 ဗားရှင်းအသစ်နှစ်မျိုးကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပထမ ဦး စွာ Apple သည် iOS 11.0.1 ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီး၎င်းသည် Outlook account အသုံးပြုစဉ် Mail application နှင့်ပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပေးခဲ့သည်။ ဒီအသေးအဖွဲ update ကို အလျင်အမြန်စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးထိုပြproblemနာကိုသီးသန့်ဖြေရှင်းရန်အတွက်ပြေးခဲ့သည်.
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် Apple သည် iOS 11.1 ၏ပထမဆုံး beta ကိုထုတ်ပေးခဲ့သည် Apple ကအလှကုန်ပစ္စည်းတိုးတက်မှုအနည်းငယ်ကိုထည့်သွင်းပေးမှာပါ သုံးစွဲသူများစွာပြသသည့်ဘက်ထရီပြproblemsနာများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းအပြင်လည်ပတ်မှုသည်သီတင်းပတ်နှစ်ပတ်အကြာတွင်၎င်းကိုစတင်ပြီးချိန် မှစ၍ ကုန်ဆုံးမည်ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ Apple က iOS 11 နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုဖြန့်ချိပြီးကတည်းကမင်းဟာအများပြည်သူသုံး beta ပရိုဂရမ်မှာမပါဝင်တော့ဘဲနောက်ဆုံးဗားရှင်း၏တည်ငြိမ်မှုကိုပိုနှစ်သက်သည်။ ပထမ beta သည်သင်၏စက်၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေသလားဆိုတာကိုသိချင်တဲ့စိတ်မရှိတော့ပါဘူးiAppleBytes မှလူငယ်များသည်သူတို့၏ YouTube စာမျက်နှာတွင် iOS 11.1 beta 1 နှင့် iOS 11.0.1 တို့၏အမြန်နှုန်းကို iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6s နှင့် iPhone7တို့တွင်နှိုင်းယှဉ်ထားသောဗီဒီယိုများစွာတင်ခဲ့သည်။
1 iPhone 11.1 ပေါ်ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 7
2 iPhone 11.1s ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 6
3 iPhone 11.1 ပေါ်ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 6
4 iPhone 11.1s ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 5
iPhone 11.1 ပေါ်ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 7
iPhone 11.1s ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 6
iPhone 11.1 ပေါ်ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 6
iPhone 11.1s ရှိ iOS 1 beta 11.0.1 နှင့် iOS 5
ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုစစ်ဆေးမလဲ iOS 11.1 သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အမြန်နှုန်းကိုတိုးတက်စေရန်ရောက်ရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ပါApple Pay Cash ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်ရောက်လိမ့်မည်။ သို့သော်ယခုအချိန်တွင် iOS 11 ၏ပထမ ဦး ဆုံးအဓိက update ကိုစတင်ရန်အချိန်မရှိသေးပေ။ iOS 11 နောက်ဆုံးဗားရှင်းသည်သင့်အတွက်မည်သို့အကျိုးပြုသနည်း။ iOS 11 သို့အဆင့်မြှင့်ပြီးနောက်ဘက်ထရီပြproblemsနာရှိနေသေးသလား။ o သူတို့ဖြေရှင်းပြီးပြီ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အိုင်ဖုန်းသတင်း » iOS ကို » iOS 11 » iOS 11.1 beta 1 နှင့် iOS 11.0.1 အကြားမြန်ဆန်စွာစစ်ဆေးမှု
ငါအဲဒါကိုထည့်ပြီးပြီ။ ဘက်ထရီသက်တမ်းအနည်းငယ်ကျဆင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုငါသတိထားမိခဲ့တယ်။ သူတို့ကဖြေရှင်းလျှင်။ မင်္ဂလာပါ
Roberto Cibrian ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းမိတ်ဆွေ၊ ကျွန်ုပ်မှာ iOS7beta 11.1 နဲ့ 1 Plus ရှိပြီးကျွန်တော့်ဘက်ထရီက ၇ နာရီမှ ၈ နာရီအထိကြာရှည်ခံပါတယ်။ မေးလ်ကလွဲလို့ဘာမှထူးထူးခြားခြားကိုင်တွယ်စရာမရှိဘဲကြာရှည်ခံနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလား။ သင်၏အာရုံနှင့်အဖြေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်္ဂလာပါ !!
Super Mario Run ကိုအဆင့်အသစ်များနှင့်စျေးနှုန်းလျှော့ချမှုဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်